यौ न क्ष मता बढाउन चाहानुहुन्छ ? यी ११ चिज खानुहोस् ! – Sandesh Press
June 20, 2021 182
याै’/न क्ष-मता बढाउने चा-हाना सबैलाइ हुन्छ । तरपनि हामिले यस बिषयमा ध्यान दिएका हुदैनाै । अाज हामिले केहि घरेलु उपाय बारे जानकारी दिदैछाै।
रातो खुर्सानी खानाले मु ड बनाउने इ न्डोर्फिन नामक तŒव शरीरमा बढी रिलिज हुन्छ । यसबाट र/क्तस-ञ्चार ती व्र बन्छ। स्वस्थ यौ’न जीवनका लागि ती/व्र र/क्तस-ञ्चार आवश्यक छ ।
Nextश्रीमानकोले काम नगर्ने भएपछि भाईबाट गर्भवती बने, बच्चामा केही असर पर्छ की ?